Laamaha Amaanka Afgooye oo eed ka soo yeertay Gaadiidley been abuur ku tilmaamay – SBC
Laamaha Amaanka Afgooye oo eed ka soo yeertay Gaadiidley been abuur ku tilmaamay
laamaha Amaanka Police-ka degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha hoose ayaa been abuur ku tilmaamay eedeyn ka soo baxday wadayaasha gaadiidka ku safra inta u dhaxeysa Marka ilaa Muqdisho.
Eedan ay soo jeediyeen Wadayaasha Gaadiidka ayaa aheyd in ciidamo katirsan dowlada Soomaaliya ay dhac , kufsi iyo baadba u geystaan xiliga ay ku safrayaan wadadaasi .
Taliye xigeenka police-ka Afgooye ayaa ku tilmaamay eedaasi mid aan ku dhaceynin ciidamada militeriga Dowlada Federaalka ah balse ay jiraan dad isku ekeeysiiya oo dhargka ciidanka xirta, kuwaas oo jidgooyooyin ka sameysa wadada u dhaxeysa Marka iyo Afgooye.
Maanta ayay darawalada gaadiidka ka xeeya ka sameeyeen wadada isku xirta Muqdisho iyo Afgooye shaqo joojin balaaran iyagoo banaan bax kooban ay ku xireen wadada, inkastoo markii dambe ciidamo ka tirsan kuwa Amisom oo u yimid ay wada hadal ka sameeyeen arinkaas.
Qaar ka mid ah wadayaashaas oo la hadlay Warbaahinta ayaa u sheegay in dhibaatada ay ku hayaan ciidamada militeriga ay gaartay heer ay markii ay safrayaanba ka qaadaan lacag dhan 600 oo shiling Somali ah, hadiise ay ka waayaan ay kula kacaan falal anshax xumi ah iyagoo mararka qaar la dega haweenka rakaab ahaanta u saaran Gadiidka ay kaxeeyaan.
Falalkan ayaan la aqoon sababta ku kalifeysa ciidamada Dowlada inkastoo taliska Police-ka Afgooye uubeen abuur ku tilmaamay arinkan isagoona dusha u saariyay dad isku ekeysiiya ciidamada.